किन घटयो हट केक ज्योतिको क्रेज ? - Purbeli News
किन घटयो हट केक ज्योतिको क्रेज ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २२, २०७४ समय: १४:१९:१७
ज्योति मगर नेपाली गित संगीतका क्षेत्रमा कुनै नौलो नाम हुँदै होईन । उनको गितको जति चर्चा हुन्छ त्यो भन्दा बढी चाँहि उनको उत्ताउलोपन र हाउभाउको चर्चा हुन्छ । नेपाली समाजमा अपाच्य शब्दहरुको उच्चारणका कारण उनी बेलाबेला चर्चामा आईरहन्छिन । उनलाई छाडा गायिका भनिएपनि उनको गित संगित लुकीलुकी भएपनि सुन्ने र हेर्नेको भने निक्कै ठुलो जमात छ । कुनै समय नायिका रेखा थापालाई छाडा र उत्ताउली भन्नेहरुको जमात केही बर्ष नबित्दै गायिका ज्योति मगर तिर फर्कियो र त्यो टयाग उनलाई दिईयो । उनको एक अन्र्तबार्ता बढी उत्ताउलो भयो भनेर रेकर्ड भएको नेपाल टेलिभिजनको अन्र्तबार्ता नै रोकिएपछि उनको चर्चा थप चुलियो । उनका बारेमा अर्नगल प्रचार र हल्लाहरु बजारमा बढी नै बिके ।
हुन त ज्योतिको हाउभाउ देखेपछी उमेर कटेका बुढा बा समेत जिब्रो टोकथे । केही बर्ष ज्योतिले नेपाली गित संगीतको बजारमा एकछत्र राज गरिन । उनको बजारमा डिमाण्ड पनि बढयो । उनी बिना कुनै मेला महोत्सब समेत खल्लो बन्थे । त्यसैले उनले जति भन्छिन त्यति नै रकम तिरेर आयोजकले उनलाई झिकाउथ्यो । उनी यतिसम्म हटकेक बनिन कि उनले जे बोलेपनि र जे गरेपनि उनी बिक्थिन । उनले जस्तो गीत गाएपनि केही समयमे उनको गीतले लाखौको भ्युज पाउँदथ्यो । उनको बारेमा कसैले टिप्पणी गरे त्यस्ता मानिसहरुलाई उनका प्रशंषकहरुले एकै छिनमा उडाईदिन्थे ।
समय एकनासको हुँदैन भनेझै नेपाली गित संगीतमा उनको चर्चा बिस्तारै कम हुन थालेको छ । उनी यतिबेला पहिलेको तुलनामा गुमनाम जसतै छिन । उनलाई खोज्ने स्रोता र दर्शकहरुमा समेत कमी आएको महशुस गर्न थालिएको छ । केही बर्षअघिसम्म हटकेक बनेकी ज्योतिको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्ने क्रममा छ । उनका गित संगीतले बिगतका तुलनामा बजार पिटन सकेका छैनन । उनी पछिल्लो समय लगभग गुमनाम कै अबस्थामा छिन । हुन त उनले यो खबर पाएपछि केही न केही प्रतिक्रिया जनाउँछिन नै तरपनि उनको लोकप्रियता भने घटदै गएको देखिन्छ ।
किन घटयो उनको लोकप्रियता ? ज्योतिम मगर नेपाली गित संगीतमा हट केक नै हुन । किनकी केही बर्ष उनको एकछत्र राज चल्यो तर खहरे खोला झै उनको लोकप्रियता बिस्तारै कम हुँदै गयो । अन्तत उनी गुमनाम कै अबस्थामा पुगिन । नेपाली समाज त्यति उदार पनि बनिसकेको छैन । जति ज्योतिले देखाउँन खोजिन । लोक गित गाएर मोर्डन नृत्य गर्न खप्पिस ज्योतिलाई क्षणिक रुपमा दर्शकले रुचाएपनि कालान्तरमा उनका लागी त्यही नै अभिशाप बन्दै गएको छ । उनी यतिबेला गुमनाम कै अबस्थामा छिन । ज्योतिले पुन गीत संगीत क्षेत्रमा धमकेदार प्रस्तुति लिएर फेरी उदाउनुपर्छ । उनको क्रेज फेरी फिर्ता हुनुपर्छ । उनका शुभचिन्तकहरु यहि प्रतिक्षामा छन ।
संङ्गीत साधनाकाे सांगीतिक ‘सप्तक’ मा बाँसुरी बाधक नगेन्द्र राई
पुर्व-राजपरिवारको कार्यक्रममा कलाकारको लर्को, तस्वीरले रंगियो सामाजिक संजाल (तस्विरहरू सहित)
वेब सिरिजको बढ्दो क्रेज, नेपाल किन भयाे कमजाेर ?
‘एक्स नाइन’मा बलिउड अभिनेता सुनिल शेट्टीको यस्ताे छ १० दिने छायांकन सेड्युल
‘इन्शाल्लाह’ मा ऋतिक राेशनसँग आलिया भट्टको जोडी